!!! #ကွတ်ခိုင် #မူဆယ်လမ်းပိုင်းနမ့်ဖတ်လွန်းကျေးရွာတွင်တအောင်းအဖွဲ့မှခရီး… | democracy for burma
!!! #ကွတ်ခိုင် #မူဆယ်လမ်းပိုင်းနမ့်ဖတ်လွန်းကျေးရွာတွင်တအောင်းအဖွဲ့မှခရီး…
tags: ကွတ်ခိုင် မူဆယ်, Burma, KIA, Myanmar, TNLA
“ကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားတဲ့နယ် မြေဖြစ်လို့အခုလိုကောက်ခံတာဖြစ်တယ်တတ်နိုင်သလောက်ပဲ ကောက်တာပါအဖွဲ့ရန်ပုံငွေအနေနဲ့တောင်းတာဖြစ်တယ်တစ်နှစ်စာပါအခုမပါရင်လည်ပါသလောက်ဘောင်ချာဖြတ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်ဘောင်ချာပြလိုက်ရပါတယ်လူထုကိ်ုအန္နရယ်မပြုပါဘူဟု”ငွေကြေးကောက်ခံမှုကိုဦဆောင်ပြုလုပ်နေသည့်တအောင်းအဖွဲ့မှဒုတပ်ရင်းမှုမြန်မာ့ခေတ်သို့ပြောသည်။
“ငွေကပါလောက်ပေးလိုက်ရတယ်ခရီးသည်တင်လိုင်းကားတွေနဲ့အရပ်သားတွေကိုဒီလိုလုပ်တာတော့မကောင်ဘူးပေါ့တစ်ချို့ဆိုတစ်ခါမှမ ကြုံဘူးတော့ကြောက်ကြတာပေါ့”ဟုမန္တလေးမူဆယ်ခရီးသည်တင် ပြေးဆွဲနေသူယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကပြောသည်။
from → ကွတ်ခိုင် မူဆယ်, Burma, KIA, MYANMAR, TNLA
← !! #ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ုရက် #Arakan #National #Network
#กู้ภัยไทย #ทีมแรกถึง #เนปาล #THAILAND #FIRST #RESCUETEAM #NEPAL →